HIBRU 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 3)
Nꞌihi na ụlọ ọ bụla nwere onye tọrọ ntọ ala ya. Chineke bụ onyeisi ntọ ala ihe nile nꞌime eluigwe na nꞌelu ụwa. Ọ bụkwa Chineke kere ha nile.
Nꞌebe ahụ ka nna nna unu ha nọ nwaa m ọnwụnwa, lee m ule, ka Chineke kwuru. Ọ bụ ezie na ha hụrụ ihe m meere ha nꞌime iri afọ anọ.
Nꞌihi ya ewesoro m ndị ahụ iwe sị ha, ‘Ha bụ ndị nnupụ isi, na ndị jụrụ irube isi nꞌiwu m.’
“Ewere m iwe, ṅụọ iyi sị, ‘Ha agaghị abata soro m zuru ike.’ ”
Olee ndị bụ ndị a nụrụ olu Chineke ma nupụ isi megide ya? Ọ bụ ndị ahụ Mosisi dupụtara site nꞌala Ijipti.
Ọ bụkwa olee ndị ka Chineke wesoro iwe iri afọ anọ? Ọ bụ ndị ahụ mehiere megide ya. Ndị ahụ nwụrụ ọnwụ nꞌọzara ebe ozu ha tọgbọkwara.
Mgbe Chineke ṅụrụ iyi sị, “Ha agaghị aba nꞌebe izuike m ma ọlị.” Ọ bụ olee ndị ka ọ na-ekwu ihe banyere ha? Ọ bụ ndị ahụ nwere nnupụ isi dị egwu, nꞌime ha.
Ugbu a anyị maara nke ọma na ha enweghị ike ịbanye nꞌebe izuike Chineke, nꞌihi na ha bụ ndị na-ekweghị ekwe.